Scoutmob: Yechokwadi-nguva Yemunharaunda Mitauro | Martech Zone
Scoutmob: Yechokwadi-nguva Yemunharaunda Dhiri
Chitatu, Kurume 28, 2012 Chipiri, Kurume 27, 2012 Douglas Karr
Kune kumwe kusanganisa kwakasangana kunze muindasitiri yezuva nezuva yekutengeserana uko kurwadziwa kwekudzikisira zvakanyanya kwakapotsa kudzima mamwe emabhizinesi akashandisa masevhisi. Scoutmob inoita kunge ichiita zvinhu zvishoma zvakasiyana, ichipa chaiyo-nguva, kubhadhara-se-iwe-enda mhinduro yemabhizinesi. Scoutmob chikumbiro chakagoverwa kune vatengi paApple, iPhone neBlackberry uko vanhu vanogona kupinda nekutarisa chibvumirano, asi chishandise chete kana vagadzirira.
Kubva ku Scoutmob MIBVUNZO peji:
Scoutmob yakasiyana sei neayo "mapoka anotenga" masosi? Scoutmob yakafanana navo mune dzimwe nzira, asi dzakasiyana zvakanyanya mune dzimwe. Kufanana nemasaiti aya, isu tinopa email neyakajairika dhiri iyo inowanikwa kwemaawa makumi maviri nemana. Asi kusiyana ne "boka rinotenga" saiti kunze uko, isu hatidi kubhadhara kumberi kubva kune avo vatengi, saka iwe unowana kuchengetedza yakawanda yemari yako yawakawana zvakaoma. Izvi zvinopa kunze-uye-nezve veko kunyange zvakanyanya kukurudzira kutsvaga kwavo sarudzo. Kupfuura izvo, yedu mbozha chikuva inokurudzira ava vanobhadhara vatengi kuti vadzoke kuzodzokorora bhizinesi. Isu tinogadzirirawo chete kune emabhizinesi emuno, saka chiratidzo chako chiri pakati pezvakanakisa izvo guta rako rinofanira kupa.
Chii chinonzi dhiri? Iwo mashiripiti eScoutmob "% kubviswa" madhiri ndeekuti ivo vanokonzeresa huwandu hwevanhu vatengi kuti vasiye maitiro avo uye vape rako bhizinesi kuyedza, saka zvese izvo isu zvatinokumbira ndezvekuti iwe unopa vateveri vedu chibvumirano chakanakisa. Ipapo isu tinokudzivirira nekutora mutengo uye nekukuchaja chete kana vatengi vedu vafunga kuti vanoda kuyedza bhizinesi rako.
Ndicharatidzwa rinhi? Chikwata chedu chemuno chinoshanda newe uye kuronga zuva rakanakisa rekuisa rako bhizinesi. Ipapo, isu tichashanda newe kugadzira yakasarudzika Scoutmob kunyora-up, kuve nechokwadi vatengi vedu (uye neshamwari dzavo dzese) vachanzwa nezve yako dhiri.
Anotora nguva yakareba sei? Bhizinesi rako richava chimiro cheedu email uye webhusaiti kwezuva rimwe. Ipapo, dhiri rako rinogara kwemwedzi mitatu. Neiyi nzira, pane kurumidziro mune yakashomeka kupihwa, asi zvakare kune yakaringana nguva yevatyairi mbozha kuti vapinde munzira yavo (uye vagare vakajairika).
anoita yaiita sei zvikuru? Kusvika parizvino, nzira chete yekushambadzira munharaunda yaive yekubhadhara boka remari kumberi, ndinovimba iro meseji rakabatwa, uyezve uyambuke minwe yako kufamba kwetsoka. NaScoutmob, isu tinongokumbira kubhadhara kana iwe uchinge wabhadharwa nevatengi vedu. Unoda kuziva zvakawanda nezve mutengo? Dzvanya apa kuti utaure nechikwata cheScoutmob nezve mitengo.
Ndinobhadharwa sei? Iwe unobhadharwa nenzira yaunofanirwa kubhadharwa nayo: nevaya vakagutsikana vatengi vachiuya kuzonakidzwa nechipo chako. Mushure meizvozvo, iwe unongotibhadharira isu nhamba yevatsigiri veScoutmob vaiti chibvumirano.
Tags: madhiri emuno
ChaCha Inotangisa Yehukama Yakabatana Chirongwa
PPC + Organic = Mamwe Dzvanya